Mandona tapany, mandoa erany… | NewsMada
Mandona tapany, mandoa erany…
Par Taratra sur 17/12/2016
Tena manao fampandrosoana ho fanatsarana ny fiainan’ny vahoaka ve izao fitondrana izao? Fihetsiketsehana etsy, fisehoana sy kabary eroa… Eo ny vahoaka mitsara, raha misitraka inona amin’izay ataon’ny fitondram-panjakana. Iza na inona no tena anaovany tamberin’andraikitra: ny vahoaka ifotony sa ny vahiny hoe ahazoana fankatoavana amin’ny karazana fanampiana, trosa…
Sao mandona tapany, mandoa erany ihany amin’izany? Eo ny tany lasa itavanan’ny vahiny; ny harem-pirenena gaboraraka sy voaroban’ny sasany na an-dranomasina na ambanin’ny tany, an-karihary na an-tsokosoko… Takalom-patsa, vidim-pihinanana. Na tian-kano, tsy tian-kano. Tompon-trano mihono ny vahoaka: tsy mahalala sy tsy ifampierana, tompony mangataka atiny.
Ny harena fongana, ny sarambabem-bahoaka ao anaty tsy fandriampahalemana, tsy fanjarian-tsakafo, tsy fisian’asa… Tsy hita izay fiovana sy fanovana. Izany ny fampandrosoana? Na atao hoe tena manao zavatra aza, izay tsy vitan’ny hafa tao anatin’ny 50 taona mahery izao fitondrana izao, araka ny vava tsy ambina lava etsy sy eroa: mitondra inona ho an’ny vahoaka?
Miara-dalana amin’ny fampandrosoana ny asa ratsy na ny ambadibadika rehetra? Tsy mahaleo ny fandoto eran-tandroka ny fandio iray siny. Sao be lavitra ny ratsy noho ny tsara mba vita? Eo ny tsy fanarahan-dalàna lava saika amin’izay atao rehetra, arahina kolikoly avo lenta; ny kiantranoantrano anjakan’ny tsimatimanota, anapotehana izay mitsikera sy mihetsika rehetra…
Mandona tapany, andoavan’ny firenena erany ny mpitondra amin’izany? Tsy mila porofo: mihamahantra andro aman’alina ny vahoaka. Voadona erany amin’izany? Tsy handoa tapany intsony, fa… Efa mandoa aty aman’afero noho ny fahasahiranan-dava izao ny vahoaka. Zava-doza ny hoe aloam-bahoaka. Rahoviana vao hahadini-tena sy hiaky fa tsy mety ny ataon’ny tena?
Sao mitsako sy mihinana tsy re, kenda vao ho dodona amin’ny hoe dony, dony… ? Raha donina amin’izany, handoa vory na handoa erany maramarina tokoa.